अघोर बाबालाइ जंगिदै किन यस्तो भने जंगी बाबाले ? सबै डराउछन् भर्खरै २ जनालाई दिएर पठाए (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
अघोर बाबालाइ जंगिदै किन यस्तो भने जंगी बाबाले ? सबै डराउछन् भर्खरै २ जनालाई दिएर पठाए (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki August 3, 2019
झापा , दमक । मृतुन्जय अघोरी बाबा अहिले विभिन्न सामाजिक संजाल लगायत सोसल मिडियामा भाइरल भैरहेको बेला फेरी मोरंगमा १ जना जंगी बाबा नाम गरेका बाबा देखा परेका छन् । आफ्नो नाम जंगी बाबा बताउने बाबा २५ बर्षको उमेर बाट घर छोडेको बताएका छन् । अघोर बाबाको जस्तै उनि पनि बोल्नमा धेरै खुलेर बोल्ने बाबा रहेछन । उनले खुलेर आफ्नो प्रेम र से,क्सको बारेमा आफ्नो बिचार राखेका छन् । आफु बाबा बनेर हिडेको १६ बर्ष भएको उनले बताएका छन् ।
मोरंगको उर्लाबारीमा उनि अहिले बस्दै आएका छन् । अघोर बाबाको बारेमा र बम्जनको बारेमा उनले खुलेर आफ्नो विचार राखेका छन् । बाबा धेरै प्रकारका भए पनि बाबाको कर्म गर्ने कम छन् भन्दै उनले आफु योग सम्बन्धि राम्रो बाबा भन्दै दाबि गरेका छन् । उनि मोरंगको उर्लाबारीमा भर्खरै आएर बसेको बताएका छन् ।अन्य बाबाहरु भन्दा फरक प्रकारको विचार भएका जंगी बाबाले नाम अनुशारको काम गर्छु भन्दै आफ्नो विचार राखेका छन् ।